Dhisay Si faana PT. 1 — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Dhisay Si faana PT. 1
Qofna ma jecla droppers magaca. Waad og tahay qofka aan la hadlayo ku saabsan. dadka Kuwa aad rabto in aad ogaato si ay u ogaadaan dadka ay u badan tahay in aad rabto in aad ogaato. Marka aan ka fekero "namedropper,"Waxaa jira hal nin in si deg deg ah ku soo dhaca maskaxdooda. Waxaan kaliya la kulmay sacab muggiis oo jeer, laakiin mar kasta oo aan la hadlay, nus ka mid ah wada hadalka waxa kor loogu qaaday oo leh dhibicyo magaca isdabamarin.
Wuxuuna ogyahay tiro wanaagsan dadka "waqti weyn", iyo waxa uu leeyahay awood aan macquul ahayn si dhuumasho ah magacyada kuwa galay wada hadalka kasta. Halkan tusaale. waxaan idinku leeyahay, "Nin Hey, waa meeqa saac?"Isaga oo reply: "Oh, waa duhur. I xasuusinaysaa markii aan ciyaaray putt putt la Michael Jackson duhurkii in Paris. "Word?
Daacadii, waxa kaliya oo aan magacaabi droppers na irk in kastoo. Waa dadka faana ee guud. Waxaan ka heli daalay nin maqalka koray faana maalmood kubada cagta ee dugsiga sare ay (waxa la joogaa wakhtigii ay u guuraan on, sayidow). Waxaan u koraan daalay saaxiibadeena mudan in la helo qaar ka mid ah si ay tweet ku saabsan meel kasta oo qalaad ay soo booqdaan. Oo ma waxaan ku caddaynaynaa dulqaadasho badan oo loogu talagalay dadka si faahfaahsan inoo item kasta oo qaali ah oo Gadan (haddii aanay tahay heesaa, Dabcan). Haddii uu si qarsoon ugu faanayay ku saabsan cidda aad u ogaato, ama u caambaaraynaynaa Guddiga fiiqaya guulaha oo dhan, faanayay kaliya ma aha qabow.
Si fudud u gelin, in ay is faanin waa in ay "ka hadlaan Kibir." Oo dhan oo naga mid ah ayaa ku xadgudbay waxa ka mid ah barta qaar ka mid ah. Waxaa had iyo jeer dhirfinaya oo duudduuban il marka kuwa kale yeela - sidaas sababta aan qayb ka qaadan weli ku sugan nafteena?
Faanayay dhacaya marka aad qabto wax (ama wax ka qaban) si la yaab leh in aad u malaynayso in qof kasta u baahan yahay in la ogaado waxa ku saabsan. Oo ma samayn keliya ay u baahan yihiin in la ogaado waxa ku saabsan, ay u baahan yihiin in la aqoonsado sida laga cabsado aad tahay isagoo (ama) waxaa. Haddii aan nahay daacad nafteena, waxaan magacaabi dhibic oo is faanin kuwa is-hoosaysiiya in saaxiibadeena sababtoo ah waxaan qabaa inay naga sii fiican. Iyo in dhab ahaan sababta ay khalad.
Dhibaatadu ma ahayn waa in waxa aad ugu faanayay ku saabsan ma aha weyn. Waxaa laga yaabaa inay. Dhibaatada waxa ay tahay in gool dhamaadka ma aha sidaas u weyn. Wax kasta oo aad sameyn aawadood oo ah ammaanta shakhsiyeed waa dembi.
Kitaabka hadlaa quruxsan si xoog leh oo ku saabsan noocan oo kale ah la hadal faan. Mid ka mid ah tusaale ahaan waa in 1 Corinthians 4:7, taas oo Paul weydiiyo, "Maxaad u leedahay in aad hesheen? Oo haddii aad u hesho, bal maxaad u faanaysaa sidii adigoo aadan sameeyey?"Waxa uu asal ahaan wuxuu ku yidhi, "Wax walba oo aad leedahay la siiyey inaad. Sidaas sababta aad faana lahaa marka aad sameeyey oo dhan wuxuu ahaa aqbali hadiyad?"
Eraygii kasta faan aan ku hadli waa kubad si toos ah loogu talagalay abuuray aan. wax kasta oo wanaagsan u yimaadda isagoo ka, taas oo macnaheedu yahay ma jiro oo inaga mid ah wuxuu qaadan karaa credit waxaa loogu talagalay. ammaanta in Caalamka oo dhan waxaa iska leh Ilaah, laakiin aan si joogto ah isku dayaya in ay sii qaar Waayo, qudheenna. In dunida tacliimeed, credit qaadashada for shaqo qof kale waxaa loo yaqaan Qishka. In dunida dhabta ah, waxa uu ugu baaqay raacday.
Well in ay markaas degtaa, xaq u? Marna, weligiisba faana!
Uma maleynayo waa arrin in fudud. Ma aha oo kaliya samayn Waxaan qabaa waa in aad mararka qaarkood ku faana, Waxaan u maleynayaa in waxa aad la abuuray si ay u sameeyaan. Ha ii sharaxo.
Xusuusnow, xididka raacday fikirayo wax aad leedahay waa si la yaab leh in qof kasta u baahan yahay in la ogaado waxa ku saabsan. Kuwa naga mid ah oo badan furtay Ciise ha haysto wax uu ku faana - Ilaah naftiisa. Haddii aan Ilaah aqoon, waxaan waa in si iska Suurka isaga by in aanu dareemi qasbin in wanaagga uu u naadiso kuwa kale (1 Butros. 2:9). Waxa uu aad u weyn in ay sii nafteena. Yeremyaah 9:23-24 si fiican u soo koobaysaa.
Tani waa waxa Rabbigu wuxuu leeyahay,:
"Ha ninka xigmadda leh oo aan ku faano oo ah xikmadiisa
ama ninka xoogga ku faana oo xooggiisa
ama ninkii hodanka ku faana oo maalkiisa,
laakiin isaga ha Kii faanaa faano this:
in uu fahamsan oo i ogyahay,
inaan anigu ahay Sayidka Rabbiga ahu wuxuu, sameeya naxariis,
caddaalad iyo xaqnimo dhulka,
waayo, waxaan ku farxaa,"
Rabbigu wuxuu leeyahay,.
Haddii aad og tahay Ilaah, Waxaan rabnaa in aad ku faana. Laakiin marka aad samayn, ma ha noqoto ee aad xigmad, ama aad xoog, ama aad maal. Halkii, faana oo. Ku faana xaqiiqada ah in aad ogtahay in Mid ka mid ah xigmad kaamil ah, xooggaaga oo dhan-awooda badan, oo marna dhamaaneynin maal nimcada. Halkii isticmaalaya erayo aad si ay u bartaan warkiisii ​​adiga kuu gaar ah, u isticmaalaan si ay u muujiyaan off uu.
Caalamka waa sida kiiska bandhigay waayo, ammaanta Ilaah a. Earth ayaa waxaa la abuuray si ay u muujiyaan xooggiisa. Geedaha la sameeyey si uu qurux bandhig. Xayawaanka ayaa gurato inay tilmaamaan weynaantiisa. Oo waa inaad? Waxaad la dhisay in faana isaga on. Sidaas darteed haddii aad samayn da'a magac, ha ahaadeen uu.
Aaron toddobaad • August 19, 2013 at 6:09 pm • Reply
Tani waa run ahaantii weyn safarka, sii shaqo marsho ah!
Erin • August 19, 2013 at 6:11 pm • Reply
this waxaa si qurux badan ku qoran. macno aad u badan. Waan jeclahay oo dhererkiisuna wuxuu sidoo. weyn on go ah. Ma sugi karo inaan ka akhrisan, Trip.
Justin Humphrey • August 19, 2013 at 6:32 pm • Reply
Trip Thanks. Tani waa hal dhibic ka fiican. Our guulaha shakhsiyeed marka loo eego nimcada Ilaah marna dhamaaneynin waa wax aan waxtar lahayn. Aan bilaabin ugu faanayay ku saabsan Rabbigeenna ah Badbaadiyeheenna!
Kelcie Sthran • August 19, 2013 at 6:35 pm • Reply
Tani waxa ay ahayd Trip fiican! Goobta cusub u egtahay la yaab leh!
Melody • August 19, 2013 at 7:04 pm • Reply
Wow. xoogbadane. Tweet, share, email!
Jay • August 19, 2013 at 7:14 pm • Reply
Waxaan hayaa wax weyn in aan idinla wadaago!! Sidaas, Waxaana raacay laba kuwan 18 Masiixiyiinta jir sano on YouTube, Instagram&Twitter oo MONTH A oo laba maalmood ka hor, oo waxay ku yidhaahdeen in ay u sheegtay Ilaah inuu ka tago NC oo taga si Los Angeles. Waxay gaadheen shalay!!!! weyn PART?!! Waxay ka tageen NC leh lix iyo toban doolar, pack dib ah oo ay aaminsan yihiin oo bilaabay LUGAYNTA!!! Jidka, waxaa la Siiyey baaskiilada, ka dibna cunto, hoyga, raacid &dhaqaalaha si ay u caawiyaan ku saabsan safarka. Oo iyagu ma ay xataa weydiin waxa loogu talagalay!!!!! Dadka kaliya soo fuulo iyaga iyo siin. Sida ay arki karin Ruuxa Ilaah oo dhan u taliya!! Waxay diiwaan vids on jidka on YouTube iyo posted photos on Instagram oo ay sidoo kale naga sii taariikhda ay twitter. Waxay YouTube aan la updated in toddobaadkii laakiin ay weli markhaatifurkaaga yaabka leh la wadaago meeshaas hore uga safarka oo dhan, oo waxay u cusbooneysiin ay twitter iyo Instagram ku dhowaad DAILY. Just doonayay in this faafin kula si aad u kala fidin karin this news weyn ee Faith. Waxaa laga yaabaa in aad xitaa ka heli kartaa in xiriir iyaga iyo ISKU DAY jinni oo KOODA. Nimankanu Ilaah waa baddasheen. markhaatifurkaaga cajiib ah. Firkradahaan faafin war wanaagsan!
waxay YouTube: YouTube.com/Livin4Christ4Lyfe
ay Instagram: Livin4Christ4Lyfe
ay Twitter: Liv4Christ4Lyfe
Barakoobi walaalkiis!! Tani waxay kor u rumaysadkayga ah rajeynayaa in aad idinkaa kordhiyaa!!
Ben Sudderth III • August 19, 2013 at 7:17 pm • Reply
Waxaan ku riyaaqay akhriska aad blog. Waxa ay ahayd mid xiiso leh oo si sahlan loo fahmi. Haynta samaynayaan wixii aad u samayn!
Ku raaxayso Barako Ilaah
David Gaines • August 19, 2013 at 7:18 pm • Reply
Haa sida carruurta Ilaah aan u dhisay ku faana xooggiisa laga cabsado, jeclahay, naxariis iyo gaar ahaan fadligiisa. Rabbigu wuxuu leeyahay,, Haddii nin wax ku faanaa ha isaga faanaa, Rabbiga ku. Swag erayga ayaa sidoo kale ka dhigan tahay inaan faano ama ku faana oo waa wax faanbadan in la sameeyo marka aad u dhan adiga kugu saabsan. Marka ay timaado in swag, dunida oo dhigaya heerka, waxay dadka u sheegi Dhadkan isbeddel ama waxa qabow ama ma. Isagoo Masiixi ah ma aha wax ugu caansan in ay bulshada maalmahan, laakiin waxaa hubaal waa ugu muhiim ah. Sida isagoo Masiixi ah ay fiican ee noo leedahay swag, swag ugu fiican, iyo hooba leh sida Ilaah doonayo Swagg ah taas oo si fudud loola jeedaa inay ku faanaan Rabbiga ah Ilaaha. In jidkeenna, our hadal, iyo xagga music waxaannu ku faannaa iyo is faanin on Rabbi Ciise Masiix, maxaa yeelay, xagga iskutallaabta Noqonno alaabta oo Fadli ah oo ay tahay howlgalka our nolosha si ay dad naftiis dheeraad ah ku guuleysan dhex wacdiga ku saabsan Injiilka nimcada.
Malemaadutse • August 19, 2013 at 7:24 pm • Reply
Thanks for ku keeno canaantiisana walaalkiis-håndbold dambi ah raacday. samayn doonaa berri ka fiican.
Sarah • August 19, 2013 at 7:38 pm • Reply
Absolutely heshiin aad ula! Waxaan marna ku fakarin ahaanshaha “dhisayo faana” laakiin waxa aad xaqiiqdii ii qanciyay. Waxaan aad u badan ku raaxaystaan ​​akhrinta aad qoraal. Cajiib ah u maleeyay xanaajin, laakiin isku dheeli tiran oo la dhiirigalin. isku dar kaamil ah labada!! Thanks for qoraal.
Jay • August 19, 2013 at 8:08 pm • Reply
Aamiin. Tani waxa ay ahayd on dhibic Tripp. Waad ku mahadsan tahay isagoo barako. #SpiritLed #BragOnMyLord
KARLONBURKETT • August 19, 2013 at 9:31 pm • Reply
Waxaan ku faana karaa on my Rabbiga?
KARLONBURKETT • August 19, 2013 at 9:32 pm • Reply
“Waxaan ka heli daalay nin maqalka koray faana maalmood kubada cagta ee dugsiga sare ay (waxa la joogaa wakhtigii ay u guuraan on, sayidow).” #Preeeach!
KGRANT • August 19, 2013 at 10:00 pm • Reply
Waxaan ku turunturoodeen dul article iyo wiil this, samayn Waxaan dareemayaa dhiirigelinayaa. Sidaas badan si ay u fiiriyaan dadku erayadan ka. Waa labada dhiirigelin ah oo loo baahan yahay in layska oo sabab baaro. Ka Nasahanyahay Eebe waana for idin siinayo hadiyadda in this qor!!!
Terrence • August 19, 2013 at 11:01 pm • Reply
Trip Job Great! Jacaylka waslad audio. Weligay ma arkin in ka hor inta! Waxaa I xasuusinaysaa markii aan sudhay baxay… Waan kaftamayaa! waaninta Great.
Langston • August 20, 2013 at 1:10 waxaan ahay • Reply
post Awesome, Trip! Sidee baan waxan u jeclahay. Aad hadda lagu dhiirigelinayaa. Waad ku mahadsan tahay addeeco oo Ilaah daynin hadlayaa aad marayo!
Hindiya • August 20, 2013 at 1:35 waxaan ahay • Reply
share cajiib Mr. Trip!!! Sidaas awood badan iyo u qaboobo!
James • August 20, 2013 at 4:34 waxaan ahay • Reply
Sidaas u weyn oo ay u arkaan Trip weli hadlayay runta xitaa haddii ay dhexdhexaad ka duwan music. Taasi waxay ahayd akhrin weyn, Waxaan ku hanweynahay inaan dheeraad ah waxaa ka mid ah maqalka. Ilaah ha idiin barakeeyo, Trip.
Reggie • August 20, 2013 at 8:53 waxaan ahay • Reply
Waxaan ka helay qaar ka mid ah wax in la beddelo.
Aubrey • August 20, 2013 at 10:35 waxaan ahay • Reply
Jacaylka lillaahinimada ee khudbada – qurux badan
Mallory • August 20, 2013 at 10:38 waxaan ahay • Reply
waxaad fadlan qisoon karaa wax kasta oo hadda ka dib?
broChris • August 20, 2013 at 10:40 waxaan ahay • Reply
xanaajiyey fikirka Great akhri Mr. Trip. Qaar badan oo tan qalbiga qaadan kartaa, oo hadda dhaqan. Sii wad isticmaalka hadiyadaha ahu uu idin siiyey, kuwaas oo hadda ka mid ah isagoo qoraa quruxsan weyn a, oo ay sii wadaan in ay wadaagaan fariin la hadiyado kuwa… waxaa la gaarey in ka badan Weligaa ma ogaan doonaa. Ilaah ammaan, #JesusIsKing
Jose • August 20, 2013 at 10:44 waxaan ahay • Reply
WORD! #TripleE kooxda
Billy • August 20, 2013 at 10:59 waxaan ahay • Reply
article Great. Tani bixiyo qaar ka mid ah aragti qoto dheer aanan weli loo tixgeliyaa ka hor. Waxaan indhaha ku hayaa inaan Qaybta Labaad! Aad u wanaagsan la sameeyey.
PhillipHolyApostleMurphy • August 20, 2013 at 12:24 pm • Reply
fariin aad u wanaagsan… Waxaa barakaysan inay maqlaan Rabbigeenna dhex hadlayo… Our Ilaah waa weyn!!!! Our Ilaah waa u roon!!!! Isagu waa sidaas oo laga cabsado!!!
okaro Rex • August 20, 2013 at 12:26 pm • Reply
piece A weyn. Ha raacday True bilaabaan.
Dri • August 20, 2013 at 2:53 pm • Reply
Waxaan this qodaa.
Mareesa • August 20, 2013 at 2:58 pm • Reply
cunto weyn oo loogu talagalay in fikirka :)
IsaacD • August 20, 2013 at 3:15 pm • Reply
Tani waxa ay ahayd article weyn, si aad u wanaagsan oo qoraal ah, oo run ahaantii waan jeclaaday qayb codka aad ku daray in ay. Waad ku mahadsan tahay Sayidow for this wadaago.
Amber • August 20, 2013 at 7:01 pm • Reply
inta badan aan saas sameeyo; is faanin. Waxa ay u badan muujisa kibirkii, annagu waan xajinnaa on top of qalbigayaga u jilcincy. Sababtan qaar ka mid ah Ilaah ammaanaya hore ee kuwa aan rumaysadka lahayn waxay noqon karaan kuwo ay adag tahay laakiin kaliya kibirka maxaa yeelay,.
Dhawaan waxaan dhaliyay mid aad u sarreeya marka aan dib-u-qaaday ASVAB ah. Waxaan ahaa ayuu u faraxsan, waayo, waan ogaa Ilaah ayaa iga caawiyay samayn. Fadligiisa ahaa waxa igu siiyey in gool iyo aqoonta wuxuu igu taal oo i caawisay in si dhab ah u fahmaan isleegyo xisaabta aan marna fahmi kari lahaa ka hor inta. Laakiinse markii aan dib u helay in aan unit aan qof walba u sheegay wixii aan farax helay laakiin markii dambe waxaan dareemay in la xukumay, maxaa yeelay, waan ogaa lahaa waxaan uun sheegay kuwii aan ogaa ahaayeen Mu'miniinta in ay ahayd Ilaah oo dhan. gaalada aan marnaba sheegay maraggaygu.
Waxaan ku samayn wasaaradda xabsi Axadda waana cajiib ah sababtoo ah marka aan joogo hore iyaga ayaan daryeeli kari lahaa ka yar haddii ay u maleynayaan waxaan ahay xamaasadeysan oo a ka dibna marka aan joogo shaqada adagtahay in aan marna la keeno magaca. Qof walba waa ogyahay Christian ah waxaan ahay laakiin midkoodna leeyihiin wax fikrad kasta oo sida uu in dhammaan ku maankayga 24/7.
Anigu waan shaqayn doonaa on this. Thanks for sharing.
caabudi doonaan • August 20, 2013 at 9:12 pm • Reply
U kaliya bedelay Trip noloshayda. Waan ku baryayaaye, waxaad heli bishii vison nd awood…. u mahadsan tahay
Alejandro • August 20, 2013 at 9:36 pm • Reply
Trip , Ilaah waa idin soo ducee nin !
Tani waxaa loo baahan yahay xusuus iyo in aan aad ugu mahad naqayaa, Ilaah jidaynayey si aad u isticmaasho Wasiirka. Waxaan ka Faasiqoobaan waxaana ay leeyihiin waxa ugu fiican ee ku faana.
Tiffanie • August 20, 2013 at 9:42 pm • Reply
Tani waxa ay ahayd mid laga cabsado! Trip Thanks. Waan jeclahay sida aqoonta weli hoos noo on in qadar gaaban :)
BrantPhelps • August 21, 2013 at 10:17 pm • Reply
Taasi waa walax wanaagsan, Trip… Wax kasta oo aan leeyihiin waxaa inoo siiyey by abuura ah u fiican iyo Awesome Ilaah oo ay qiimo leh ugu faanayay ku saabsan!
Isaac • August 22, 2013 at 10:04 waxaan ahay • Reply
Aad baan u la yaabay qaabka aad u dhexeeya la xiriira testatment hore oo cusub si ay nooga caawiyaan fahmo khatarta ah ee braging nafteena on!! Ma this waxyoonay ee track aad dhawaan “Brangin on Ilaahay”???
Waxaan jeclahay in aad music Haqoosna ay si ku habboon!! Ilaah ha idiin barakeeyo!! Ka dhig kor u shaqo wanaagsan!!
Jay • August 22, 2013 at 8:31 pm • Reply
Xasuuso dadka Masiixiyiinta ah ee bilaa guryaha Waan idiin sheegay guys ku saabsan? Waxay u baahan yihiin caawimo.. caawimaad kasta noqon lahaa guys weyn. Ilaah ku siin doonaa, laakiin Ciise ma uu samayn karin shuqullada meeshaas oo rumaysad u lahayn. Qof kasta oo LA waxaa dhabarka u sababta oo ah la'aanta of iimaanka. Firkradahaan taageero boqortooyada oo la siiyo waxa aan awoodno. Waxa kale oo ay samayn music iyo Ruuxa run ahaantii ku hadla ee lyrics ay. Firkradahaan faafin in sidoo! Waxaan arrintan loo sameeyo, waayo, boqortooyada y'all. Email livin4christ4lyfe@gmail.com .. Halkaan hoose ka caawin walaalihii. aad oo dhan jeclaada.
Jessica • August 26, 2013 at 9:36 pm • Reply
Blog Awesome mahadsanid Rabbiga ii canaantay via Blog this, i baahan tahay si ay u bilaabaan braggin on Eebahay Hallelujaah! :-)
qaniinyada • August 28, 2013 at 12:39 waxaan ahay • Reply
Run ahaantii jeclahay shaqada aad qabanayso. la barakeeyey in hab fiican oo aad wasaaradda
Xusuuso: Trip Lee • Dhisay Si faana PT. 2
Xusuuso: Trip Lee • faana Waraaq-
Terence • April 9, 2014 at 2:11 pm • Reply
xoogbadane! Waxaad ku dumiyeen daacad. xigmad aad u badan, waayo, nin dhallinyaro ah. Waxaan ku tukanayay, oo adiga iyo qoyskaaga. hadiyadihiinna qolka idiin dhigi doonaa. Kaliya waxa Ilaah idiin yeedhay inaan sameeyo, aad leedahay Oil ah, Ruuxiisa Quduuska ah. Nabad iyo barwaaqo in aad (Shilom)!